Friday September 11, 2015 - 20:19:54 in Wararka by Web Admin
Shirkada IKEA ayaa isbuucii hore ku dhawaaqday in ay ku deeqayso lacag gaaraysa 356 milyan oo kr taasoo inta badan loogu tala galay qaxootiga Soomaalida ee ku nool agagaarka Doolow-Cadoow ee xuduuda Ethiopia iyo Somalia. Lacagta oo ay maarayn doonto
Shirkada IKEA ayaa isbuucii hore ku dhawaaqday in ay ku deeqayso lacag gaaraysa 356 milyan oo kr taasoo inta badan loogu tala galay qaxootiga Soomaalida ee ku nool agagaarka Doolow-Cadoow ee xuduuda Ethiopia iyo Somalia. Lacagta oo ay maarayn doonto UNHCR ayaa 309 milyan waxaa lagu taageeri doonaa qaxootiga Soomaalida halka inta kale loogu tala galay wadanka Burkina Faso.
Lacagta ayaa loo isticmaali doonaa in lagu dhiso kaabayaasha dhaqaalaha ee qaxootiga si ay u gaaraan isku filaasho. Iyo in kor loo qaado heerkooda nolosha. Sida uu qoray wargeyska Expressen.
Ma ahan markii ugu horeysay ee IKEA ay lacag ugu deeqdo qaxootiga Soomaalida ee ku nool Ethiopia. Sanadkii 2011 ayay IKEA sidoo kale lacag ugu deeqday qaxootiga Soomaalida.
Maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa aad kor ugu kacday taageerada loo samaynayo qaxootiga, iyadoo shirkado iyo urur badan ay bixiyeen lacago badan. Taageerada inta ugu badan ayaa hada ku socota bariga dhexe qaasatan wadanka Syria balse IKEA ayaa u muuqata in aysan hilmaamin qaxootiga Soomaalida.